धनगढीबाट चुनाव जित्ने मै हुँ
दिनेशराज भण्डारी (उमेदवार विवेकशील साझा पार्टी, धनगढी ५)
२०७४ मङ्सिर १४ बिहीबार १९:४२:००
दिनेशराज भण्डारी धनगढी क्षेत्र नम्बर ५ का विवेकशील साझा पार्टीबाट प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षका उमेदवार हुन् । होटल व्यवसायी भण्डारी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि समाजसेवी समेत हुन् । आफ्नो पहल र संयोजकत्वमा धनगढीमा धेरै काम भएको तथा मतदातासमक्ष आफू जनताको काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति भएकाले चुनाव जित्ने उनी दाबी गर्छन् । घरदैलो कार्यक्रममा युवा र इमान्दार मतदाताको लहर आफ्नो पार्टीप्रति देखिनु अन्य दलप्रतिको असन्तुष्टि भएको उनको बुझाई छ ।
परिवर्तनका लागि एउटै व्यक्ति काफी हुने विचार राख्ने भण्डारीसँग उनका चुनावी एजेण्डा, विकास निर्माणमा धनगढीको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीः
हामीले घरदैलोका लागि मतदातालाई आफ्नो टोलमा बोलाइदिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो अनुरोधअनुरुप उहाँहरुले बोलाएका ठाउँमा गएका छौं । प्रशिक्षण, चुनावी सभा, घरदैलो अभियान चलाइरहेका छौं । मतदातालाई भेटेर हाम्रो चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गरिरहेका छौं ।
पुरानो राजनीतिक संस्कार र नेपालको मुहार बदल्ने भनेर हिँडेको तपाईंको दलले प्रचारको शैली चाँहि बदल्न सकेन, किन ?
प्रचार शैली नयाँ नै छ हाम्रो । केही दिन अगाडि बीबीसीले पनि विवेकशील साझाको प्रचार शैली अरुभन्दा फरक छ भनेर समाचार बनाएको थियो ।
हामी सकेसम्म धेरै मतदाताको घरमा पुगेका छौं ।
मतदाताकहाँ जाँदा हामी स्थानीय स्तरमा विकासमा आबद्ध र प्रतिबद्धता जनाएका र काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई सँगै लिएर गैरहेका छौं ।
अरुका भन्दा फरक चुनावी एजेण्डा के छन् तपाईंका ?
यो देशमा विभिन्न वादका नाममा धेरै धोका दिइयो जनतालाई । लोकतन्त्रका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीमा लुटतन्त्र भयो ।
६४ जना मन्त्री भए । दर्जनको नजिकमा विनाविभागीय मन्त्री छन् । राज्यको सुविधा लिइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चिन्नुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचार भन्दा पनि हाकाहाकी देखाएर लुट्ने काम भैरहेको छ । यो बन्द गरिनुपर्छ । इमान्दारिता, पारदर्शिता र उत्कृष्टतामा हामीले जोड दिइरहेका छौं ।
भ्रष्टाचार जिरोमा झार्नुपर्छ, जनताको काम तत्काल हुनुपर्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन हुनुपर्छ, विदेश जाने युवाको संख्या रोक्न कसरी सकिन्छ भनेर हामीले नीति बनाउन सकिन्छ ।
विकास र समृद्धि नभएसम्म विदेश पलायनको क्रम रोकिँदैन ।
तपाईंले भनेका यी एजेण्डा अरु दलले पनि उठाउँदै आएका साझा एजेण्डा हुन् नी !
यहाँका सचेत मतदाताले कुरा बुझ्नु भएको छ । यहाँबाट जितेर गएका दलहरुको के गरे भन्ने सबैले बुझ्नुभएको छ । १२ वर्षदेखि हामीले यहाँका २१ वटा मेरुदण्डका रुपमा रहेका ब्याकबोन प्रोजेक्टका बारेमा हामीले यो देशको नेतृत्वसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, ध्यानाकर्षण गरेका छौं । २१ किलोको माला लगाएर हामीले नेताहरुलाई झक्झक्याएका छौं ।
उहाँहरुले जति काम गर्दै जानुहुन्छ त्यति मालाको वेट घटाउँदै जान्छौं भनेर सँगै भनेका पनि थियौं ।
२२ वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवा त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यो ठाउँले मान्छे नपाएको होइन । हामीले मान्छे बनायौं, तर त्यो मान्छेले यो ठाउँलाई बनाएन । अञ्चल अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन, पर्यटनको कार्यालय बनाइदिन आग्रह गरेका थियौं, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमा राजनीति नघुसाइदिन आग्रह गरहेका थियौं । यी एजेण्डा हामीले उठाएका छौं ।
तपाईंले हरेक क्षेत्रले राजनीति बुझ्नुपर्छ तर गर्नुहुँदैन भनेर भनिरहँदा धनगढीमा अधिकांश व्यवसायीहरु तपाईंकै पार्टीमै प्रवेश गर्नुभएको छ नि !
धेरैको बुझाई यस्तै छ । मेरा छोराछोरी यहीँ जन्मिएका हुन्, यहीँ पढेका हुन्, म हिँड्ने सडक यहीँको हो । म समृद्ध हुँदा मेरो गाडी जोडुँला, वर्षको एउटा तला थपुँला, घर जोडुँला । राजनीति भनेको पेशा होइन । यसलाई पेशा बनाइयो । पेशा व्यवसाय नभएका व्यक्तिले रानीतिलाई सेवा बनाउन सक्तैनन् । यहीँबाट विकृत सुरु हुन्छ, भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । राजनीति त राष्ट्रिय स्तरको सेवा हो ।
पेशा व्यवसाय भएका व्यक्ति राजनीतिमा आए भने मात्रै भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नु भएको हो ?
हो । मैले भन्ने खोजेको त्यही हो । व्यवसायमा सफल भएको व्यक्तिले आर्थिक नीति पनि राम्रो बनाउँछ ।
पेशा व्यवसाय भएका व्यक्ति मात्रै राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने होइन । तर राजनीतिलाई समाजसेवा गर्ने इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने हो ।
समाजमा स्थापित र योगदान गरेका व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलदेखि पछिको दोस्रो ठूलो विमानस्थल गेटा विमानस्थल हामीले आफ्नै पहलमा रिक्सावालाकोसम्म पैसा हालेर बनाएका हौं । स्रोत थिएन इच्छाशक्ति मात्रै थियो । अभावको सुदुरपश्चिम भन्ने कन्सेप्ट थियो तर हामीले सुन्दर सुदुरपश्चिम भनेर ब्राण्डिङ गर्यौं ।
त्यसैले इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन र ल्याउन हामी आग्रह गर्छौं । शेरबहादुर देउवालाई हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिदिनुस् भन्यौं उहाँले मान्नुभएन । गोविन्द केसीले आएर सञ्चालन गरिदिनुहुन्छ कि यहाँ आएर आमरण अनसन बस्नुस् भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको जनाधार कस्तो छ गाउँगाउँमा ?
तराजुको लहर छ । सबैपार्टीबाट मतदाता निराश छन् । मतदाता कसैको पकेटमा छैनन् । मतदाता जनता र विकासप्रति जो डेडिकेट छ उसलाई नै छान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
गोपी हमाल स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मेयरमा २७ सय मतले हार्नु भएको हो ।
तर, उहाँको ३७ सय मत बदर भएको थियो । मत बदर नभएको भए उहाँले जित्नु भएको थियो । उहाँ अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ । चुनाव चिन्ह त्यो बेला ५ दिन अगाडि मात्रै पाएका थियौं । यो ठाउँलाई केही योगदान दिएका र दिन सक्ने युवा हामीसँग हुनुहुन्छ ।
अरु दलप्रतिको निराशा नै तपाईंको जित्ने आधार हो ?
त्यो पनि हो । र, हिजो हामीले आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्दैगर्दा समाजलाई पुर्याएको योगदान नै हामीले जित्ने आधार हो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गोपी हमालले नभए कसरी त्यति धेरै भोट पाउनुहुन्थ्यो ? यो ठाउँमा उहाँले थुप्रै काम गर्नुभएको छ । मैले यो ठाउँमा धेरै काम गरेको छु । खुटिया दिपायल सडकखण्ड २०५ किलोमिटर छ । यो भन्दा छोटो बाटो छ भनेर हामीले मेरो संयोजकत्वमा सर्भे गरायौं । जम्मा ७२ किलोमिटर छ । हामीले यो दशेका हरेक नेतालाई भन्यौं ५ वर्षको इन्धनको बचतले यो बाटो बनाउन सक्छौं ।
अहिले त्यो बाटो सुरु भएको छ । अघिल्लो चुनावमा यो बाटोलाई शेरबहादुर देउवाले मेरो मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ भनेर भन्नुभयो तर बनाउनु भएन । अहिले उहाँकै धर्मपत्नी आएर म बनाउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ । जबकी त्यो दिपायलबाट आधा बाटो ट्रयाक ओपन भैसकेको छ ।
उहाँहरुले अरु कुरा गरे हुन्छ नि किन हामीले गरेको कुरा उठाउँनुहुन्छ ? प्रत्येक पटक एउटै कुरामा प्रत्यक पटक प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ तर काम गर्नुहुन्न । मेडिकल कलेज, विशेष आर्थिक र पर्र्यटकीय क्षेत्र, गौरीफण्टा नाका सुदुरपश्चिमको भविश्य बनाउने नाका हुन्छ यसलाई खोल्नुपर्छ भन्यौं तर सुन्नुभएन ।
गोपी हमालले पाएको भोट तपाइँले पाएर जित्छु भन्नुभयो । उहाँ त स्वतन्त्रबाट उठ्दा स्वतन्त्र व्यक्तिले दिएको भोट थियो । ती सबै मतदाता विवेकशील साझामा आउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
उहाँले पाएको भोट भन्दा बढी भोट ल्याएर हामी जित्दैछौं । त्यो बेला स्वतन्त्रमा रहेका सबै युवा अहिले विवेकशील साझामा आइसक्नुभयो ।
हिजो डराएर लुकीलुकी भोट हाल्ने ६ हजार ५ सय युवा यही क्षेत्रबाट हामीसँग संगठित भैसक्नुभएको छ । हामी मत माग्न जान्छौं हामीलाई पार्टीको सदस्यता दिनुस् भनेर भनिरहनु भएको छ ।
यो विकास र समृद्धिको पक्षमा आएको लहर हो । इमान्दार र इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने माग हो ।
देशभारबाट कति सिट जित्ने आंकलन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भनेअनुसार उहाँले काठमाडौं १ नम्बर क्षेत्रबाट, २ नम्बरबाट डा. सूर्यराज आचार्यले, उज्वल थापाले पनि चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ । मैले यहाँबाट चुनाव जित्दैछु । समानुपातिकमा पनि हामीले राम्रै मत ल्याउँछौं ।
बेलौरीबाट पनि साथीहरुले चुनाव चिन्दै छन् भन्ने हाम्रो आंकलन हो ।
तपाईंको दाबीअनुसार नै जित्ने हो भने पनि ७∕८ सिट कट्दैन, तपाईंहरुले देश परिवर्तन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर थोरै सिट भएका दलहरुले त संसदमा नियमापत्ति जनाउने बाहेक के नै गर्न सक्छन् र ?
यो प्रश्न धेरैले सोध्नुभयो । परिवर्तनका लागि धेरै व्यक्ति, चाहिँदैन, एउटै व्यक्ति काफी हुन्छ । आज प्रतिपक्ष छैन । हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्छौं । विकृति र विसंगतीविरुद्ध आवाज उठाउँछौं ।
भ्रष्टाचारीलाई अदालतमा उभ्याउने् वातावरण बनाउँछौं । हिजो हामी राजनीति र संसदमा नहुँदा एयरपोर्ट बनाएर देखायौं ।
कुलमान घिसिङ एक्लो व्यक्तिले १८ घण्टाको लोडसेडिङ घटाएर शून्यमा झार्नुभयो । त्यो उहाँको एक्लो प्रयास थियो । यसको अर्थ इच्छाशक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने हो । देश बनाउने प्रवल इच्छाशक्ति भएका साथीहरु हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ । एउटा मात्रै सिट भयो भने पनि हामी धेरै परिवर्तन गरेर देखाइदिन्छौं ।
मतदाता शिक्षा मतदाता समक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी दलहरुको हो कि हैन ? तर त्यो त देखिएन नि किन ?
हो । यसमा कुनै शंका छैन । मतदान रक्तदान, जीवनदान भन्दा पनि ठूलो महादान हो । त्यसैले कसलाई कसरी मतदान गर्ने भनेर सिकाउनु मैदानमा उत्रिएका दलहरुको कर्तब्य हो ।
आफ्नै पार्टीको कुरा गरेजस्तो हुन्छ, तर हामीले कसरी मतदान गर्ने भनेर सिकाएका छौं घरघरमा पुगेर । अरुको पार्टीको चाँही मलाई थाहा भएन । सायद सबै पार्टीले मतदाता शिक्षा नदिएकाले यो गुनासो आएको हुनसक्छ ।